Siyaasad - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
Waddanka Mareykanka, siyaasadaha federaalka ee go'aamiya sida dadku u soo galaan dalka, u helaan guryo, u helaan shaqo una helaan adeegyo muhiim ah sida daryeelka caafimaadka ayaa si isdaba joog ah u soo kordhaya. Taasi waa sababta aan u diyaarinay hagahan siyaasadaha ugu muhiimsan ee la doonayo in la ogaado.
Madaxweyne Biden maalintii ugu horreysay ee xafiiska, wuxuu saxiixay amarro dhowr ah oo fulin ah oo dib u rogay siyaasado badan oo madaxweynihii hore ee Trump, oo ay ka mid yihiin joojinta xayiraadaha socdaalka, joojinta masaafurinta 100 maalmood ee soogalootiga badankood iyo joojinta dhismaha derbiga xuduudaha, iyo waxyaabo kale. Siyaasadaha maamulka Biden ayaa la filayaa inay keenaan dib u habeyn weyn oo dhanka socdaalka ah.
➔ Sidee ayey Xeerarka Biden u Saameyn Doonaan Soogalootiga iyo Qaxootiga
Bishii Maarso 9, 2021, xeerkii eedeynta dadweynaha ee ay soo bandhigtay maamulka Trump ayaa la joojiyay. Maalintaas, Waaxda Caddaaladda waxay go’aansatay in ay joojiso difaacidda xukunka, Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa laashay dhammaan rafcaanadii laga sugayay ee la xiriiray xeerka, halka Wareeggii 7aadna uu laalay racfaankii dowladda. Bishii Maarso 13, 2021, Waaxda Amniga Gudaha ayaa si rasmi ah uga noqotay xukunkii eedeynta dadweynaha ee Oktoobar 2019. Meeshii sharciga, Adeegyada Jinsiyadda iyo Socdaalka Mareykanka (USCIS) waxay dib u soo celiyeen Tilmaamtii Field ee 1999.
Maxay tani uga dhigan tahay soo galootiga?
Laga bilaabo Maarso 9, 2021, adeegsiga waxyaabaha daruuriga ah, sida SNAP (“stamps food”), looma qaban doono dadka soogalootiga ah marka la codsanayo gelitaanka Mareykanka ama wax laga beddelayo xaaladda socdaalka. Soogalootiga gobolka Washington iyo qaxootiga waa inay xor u ahaadaan inay raadsadaan waxtarro guud oo ay u qalmaan.
Waa maxay baahiyaha aasaasiga ah ee laga heli karo Washington?
Muhaajiriinta iyo qaxootiga ku nool Mareykanka waxay la kulmaan caqabado badan markii ay isku dayayaan inay helaan daryeel caafimaad, oo ay ku jiraan la'aanta hagitaan cad oo ku saabsan goorta iyo sida loo helo daryeelka iyo helitaanka caymiska caafimaadka. In kasta oo habka helitaanka caymiska ay ku kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba sharciga uu qofku haatan ku sugan yahay, soo galootiga iyo qaxootiga oo dhan waxay heli karaan daryeel caafimaad iyadoon loo eegin inay caymis caafimaad leeyihiin iyo in kale.
➔ Hawsha Nidaamka
Sharciga socdaalka, kafaalaqaade waxaa lagu qeexaa inuu yahay qof ka caawiya soo galootiga ama qaxootiga inuu noqdo degane sharci rasmi ah haysta (haysta kaarka cagaaran) asagoo saxeexaya dukumenti la yiraahdo "dhaarta taageerada." Kafaalaqaade wuxuu leeyahay mas'uuliyado gaar ah sharciga hoostiisa, sidaa darteed garashada iyo fahmida mas'uuliyadahaasi waa lama huraan kahor intaan la saxiixin dhaarta taageerada.
Fahamka Sharciga iyo Socdaalka
Hel Wararkii Ugu Dambeeyay ee Siyaasadda